I-Semalt i-Elaborates Kwi-URLitor-I-Cool Cool Web Scraping & Data Extraction Tool
I-URL yindlela entsha yokwenza i-web kunye ne-extraction tool. Ukusebenzisa i-URL, kufuneka udibanise uluhlu lwazo zonke ii-URL umxholo ofuna ukuyifumana kwi-intanethi kwisifanekiso esinikeziwe. Emva koko kufuneka ucacise isici se-HTML ofuna ukukhishwa kwi-webpages kwaye nqakraza iqhosha lokungenisa. Kulula nje oko. Ngeli sixhobo, akudingeki ukuba wenze ikopi okanye unamathisele kwi-browser.
xPath ulwimi olusetyenziselwa ukukhangela ulwazi kwiifayile ze-XML. Isebenzisa amagama athile ukukhetha i-node-setshi okanye iinombolo kwiifayile ze-XML. Amazwi athi iXPath iyaziqonda zifana nezo zisetyenziswa kunye neefayile zekhompyutheni okanye iifom.
Nangona i-XPath isetyenziswe ngeelwimi ezininzi zeeprogram, esi sixhobo sakhiwe kubasebenzisi abangenayo ulwazi lohlelo. Ngoko, akudingeki ukuba ube ngumprofeti ukuba uyisebenzise. Ngeli sixhobo, unokukhipha idatha kwii-HTML kunye ne-XML amakhasi.
Ukuze kube lula ukusetyenziswa, amanqaku amaninzi asetyenziswa kwi-XPath ayenzelwe ngaphambili kwimenyu ehlayo ukwenzela ukuba abasebenzisi bafune kuphela ukukhetha nawuphi na kubo kuxhomekeke kwinjongo yabo. Nangona kunjalo, abasebenzisi abanolwazi nge-XPath banelungelo lokusebenzisa amazwi abo abaqhelekileyo xa befuna..
Esi sixhobo senziwe ngekhono lama-URL e-URL kwiseshoni esisodwa sokuqhawula, kwaye kuthatha iindibano ezili-10 ngexesha elilodwa. Ngamanye amagama, inokukhangela idatha ukusuka kwii-URL ezili-100 ngelo xesha.
1. // div  - Eli binzana likhetha isahluko sesibini ukwahlula;
2. // link [@ rel = 'canonical'] / @ href - Eli gama likhetha indawo (ref) yethegi esetyenziselwa misela i-rel attribute elinganayo kwi-canonical;
3. / html / intloko / meta [@ name = 'description'] / @ umxholo - Eli gama lisetyenziselwa ukukhetha umxholo; 4. // * [@ class = 'iklasi-igama'] - Ungasebenzisa eli gama ukukhetha zonke izinto kunye 'negama leklasi' njengoko Iklasi yeCSS;
5. // h2 | // isihloko - Eli binzana lingasetyenziselwa ukukhetha zombini i-H2 yokuqala kunye nephepha lephepha; 6. // * [igama
= 'h1' okanye igama
= 'isihloko'] - Eli binzana lisebenza ngokufana neli ngasentla. Nangona kunjalo, ibinzana elichazwe ngasentla libhetele kuba lifutshane; 7. // * [iqukethe (@class, 'thumb')] - Eli binzana likhetha yonke into eneklasi yeCSS kwaye iqulethe 'isithupha' ukukhutshwa; 8. // umzali :: * [itekisi
= 'Mkelekile'] - Eli binzana likhetha umzali kwanoma yiphi na into enomxholo othi 'Mkelekile ';
Esi sixhobo siyinkohlakalo yeBeta kwaye sisenokusebenza ngamaphutha athile. Nangona kunjalo, isisetyenzisi esikhulu kubasebenzisi abancinci okanye abanakho ulwazi lweprogram njengoko onke amazwi asetyenziswa rhoqo asetyenziswe ngaphambili kwimenyu njengoko kuchaziwe ngaphambili.